आइपिएलमा राजस्थानमाथि कोलकाताको जित | Hamro Khelkud
लिभरपुलका फर्मिलो भित्राउने प्रयासमा बार्सिलोना
एमएलएसमा रुनीको विश्वस्तरीय गोल [भिडियो]
एटलेटिको म्याड्रिडले नेपाली क्लबलाई सहयोग गर्ने !
‘रोनाल्डो ल्याएपछि मलाई लखेटे’ – फरवार्ड गोन्जालो हिगुआइन
यस्तो पनि रन आउट (भिडियो)
‘मेसी र बार्सिलोनासँग सेभिल्ला डराउँदैन’ – डिफेन्डर सिमोन केएर
आइपिएलमा राजस्थानमाथि कोलकाताको जित
बुधबार, जेष्ठ २, २०७५
कोलकाता (एजेन्सी)– कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा मंगलबार राजस्थान रोयल्सलाई ६ विकेटले हराएको छ । १ सय ४३ रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकाताले २ ओभर बाँकी रहँदा ४ विकेट गुमाएर १ सय ४५ रन बनाएको थियो ।
लिग चरणको एक खेल बाँकी रहँदा जितपछि कोलकाता (१४ अंक) तेस्रो स्थानमा थप मजबुद भएको छ भने चौथो स्थानको राजस्थानको १२ अंक छ । पाँचौं स्थानको किङ्स ११ पञ्जाबको पनि १२ अंक छ ।
मध्यम लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कोलकाताका लागि कप्तान दीनेश कार्तिकले अविजित ४१ रन जोडे । त्यसअघि ओपनर क्रिस लेनले टोलीका लागि सर्वाधिक ४५ रनको योगदान गरे । अर्का ओपनर सुनिल नारिन र नितेश रानाले समान २१ रन तथा आन्द्रे रसेलले अविजित ११ रन बनाए ।
लेनले ४२ बलमा ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । कार्तिकले ३१ बल खेल्दै ५ चौका र १ छक्का नै प्रहार गरे । राजस्थानका बेन स्टोक्सले ३ र इश सोदीले १ विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको राजस्थानले १९ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ४२ रन बनाएको थियो ।
राहुल त्रिपाठी र जोस बट्लरले पहिलो विकेटका लागि ६३ साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएपनि त्यसपछिका ब्याट्सम्यानले इनिङ सम्हाल्न सकेनन् । बट्लरले टोलीका लागि सर्वाधिक ३९ रन जाडे भने त्रिपाठीले २७ रन बनाए । बट्लरले २२ बलमा ५ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।
त्रिपाठीले १५ बलमा ४ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै टोलकिा जयदेव उन्ड्कटले २६ रन थपे । १८ बल खेलेका उनले ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । कप्तान अजिन्के रहानेले ११, सञ्जु सामसनले १२ र बेन स्टोक्सले ११ रन बनाए ।
कोलकाताका कुलदीप यादवले ४, आन्द्रले रसेल र प्रसिद्ध कृष्णले समान २ तथा शिवम माभी र सुनिल नारिनले समान १ विकेट लिए । आइपिएलमा बुधबार मुम्बई इन्डियन्स र किङ्स ११ पञ्जाबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
शुक्रबार, कात्र्तिक २, २०७५
बिहीबार, कात्र्तिक १, २०७५
दशैंमा देशबाहिर रहने नेपाली खेलाडी
एपीएल डेब्युमा सन्दीपको प्रभावशाली प्रदर्शन
नेपाल पहिलो चरणको च्याम्पियन, अब विश्वकप छनोट यात्रा कस्तो ?
सन्दीप लामिछाने एपीएलमा डेब्यु गर्दै (प्रत्यक्ष प्रसारण)
ललितपुर महानगरले थ्री स्टारलाई ३२ लाख दिने !
च्यासलले भित्र्यायो क्यामरुनका फरवार्ड चीको
पीपीएल उद्घाटन खेलमा शरद र सन्दीपको टोली भिड्ने
भुटानको लिगमा प्रकाश ‘म्यान अफ द म्याच’
‘फुटबल खेलेर पछुताउनु परेन’– पूर्व कप्तान अनिल
पोग्बालाई बार्सिलोना ल्याउन मेसीको आग्रह
‘हामेस कुनै हालतमा म्याड्रिड फर्कने छैनन्’
‘एमबाप्पे ब्यालोन डी’ओरका हकदार हुन्’
बार्सिलोनाले तोडेको सपना